Madaxweyne Xaaf oo ka hadlay gargaarka Galmudug iyo arrimaha Ahlu Sunna (Dhageyso) – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo maal-mihii dembe ku maqnaa Dalka kenya ayaa maanta waxaa uu gaaray Magaalada Cadaado ee Xaruunta ku meel gaar ka ah ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Garoonka Diyaaradaha Cadaado ayaa Waxaa ku soo dhaweeyey Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi iyo Xubno ka tirsan labada Gole ee Maamulka Galmudug iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan Cadaado.
Mudane Xaaf ayaa Warbaahinta kula hadlay Madxtooyada Dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay maalmaha soo socda Cadaado soo gaari doonaan Diraado gar gaar sida taasoo loogu caawinaayo Dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Galmudug.
Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha Galmudug ayaa soo dhanka kale soo hadal qaaday xaalada siyaasadeed ee Gobolada dhexe sheegayna inuu rajeynaayo in laga gaaro horumar.
The post Madaxweyne Xaaf oo ka hadlay gargaarka Galmudug iyo arrimaha Ahlu Sunna (Dhageyso) appeared first on Ilwareed Online.
DEGDEG: Qarax goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho